कफीे उत्पादन ७% ले वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home समाचार कफीे उत्पादन ७% ले वृद्धि
कफीे उत्पादन ७% ले वृद्धि
काठमाडौं (अस) । पछिल्लो समय मुलुकमा कफीको उत्पादन ७ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रले कफीको प्रवद्र्धनमा जोड दिएसँगै गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कफीको उत्पादनमा वृद्धि भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जानकारी दिएको हो । गत आवमा ४ सय ६६ टन कफी उत्पादन भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले बताए । अघिल्लो आव २०७२÷७३ मा कफीको उत्पादन ४ सय ३४ टनमा सीमित थियो ।
गौतमका अनुसार अघिल्लो आवमा २ हजार ६ सय १८ हेक्टर जमीनमा कफी खेती गरिएकोमा गत आवमा सो क्षेत्रफल बढेर २ हजार ६ सय ४६ हेक्टर पुगेको छ । कफी खेती गर्ने क्षेत्रफल बढ्नुलगायत विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूले गर्दा उत्पादन बढेको गौतमले बताए । पछिल्लो समय सरकारले कफीरोपण वर्ष घोषणा गरी कफीको करीब ७ लाख गुणस्तरीय बिरुवा रोपेको थियो ।
यसैबीच इण्टरनेशनल ट्रेड सेन्टरको सहयोग र वाणिज्य मन्त्रालयको अगुवाइमा केही समयअगाडि कफीको पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय निर्यात रणनीति तयार गरिएको गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार रणनीति तयार भइसकेकाले आगामी दिनमा कफीको प्रवर्द्धन एवम् निर्यात वृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाल कफीसँग सम्बन्धित विश्वकै सर्वोच्च संस्था इन्टरनेशनल कफी अर्गनाइजेशनको समेत सदस्य भइसकेको छ ।
स्वदेशमै बढ्दो माग
पछिल्लो समय नेपाली कफीको माग स्वदेशी बजारमा पनि अत्यधिक बढेको छ । बोर्डका अनुसार मुलुकभित्रै कफीको उत्पादन बढिरहँदा प्रमुख शहरहरूमा विदेशी कफीको तुलनामा स्वदेशी कफीको खपत बढी हुन थालेको छ । यसले नेपालमा विदेशी कफीको आयात घटेको पनि गौतमले जानकारी दिए ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७२/७३ मा १० करोड ८१ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको कफी विदेश निर्यात भएको थियो । यस्तै सोही आवमा ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको कफी आयात भएको थियो । तर गत आव २०७३/७४ मा भने कफीको आयात र निर्यात दुवै घटेको देखिन्छ । आव २०७३/७४ मा नेपालबाट रू. ८ करोड ४५ लाख मूल्य बराबरको कफी विदेश निर्यात भएको छ भने रू. ५ करोड ४ लाख मूल्य बराबरको विदेशी कफी आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने, ‘उत्पादन बढ्दा आयात निर्यात दुवै घट्नुले नेपाली कफीको कफीको बजार मुलुकभित्रै बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’